Bindu mapoto uye zvinhu zvavo - ndeipi yakanyanya kunaka?
Iyo kurongeka kwebindu kunofanira kuitwa nekutarisira kukuru. Nekudaro, kunyangwe kana mushandisi asina bindu rakakura paari, asi bindu diki chete, kana kunyange mhanza kana terari, rinogonawo kugadzira chikamu chegirini nzvimbo. Hwaro hwayo hunobva hwadaro mapoto ebindukusarudzwa kwavo kukuru.
Ndeapi mapoto ejecha kuti asarudze, achifunga nezvezvinhu zvavo kana saizi?
Onawo: Diki rekuvakwa kwedhorobha
Mhando dzemapoto ebindu
Bustani mapoto anowanikwa mune yakanyanya kuwanda sarudzo. Izvo zvakasiyana muchimiro, ukuru uye zvinhu, saka zvese zvinoenderana nepfungwa yekugadziriswa kwenzvimbo. Kana mapoto akakamurwa maererano nekwavo zvinhu, zvinotevera zvinofungwa.
Mapuranga emunda wemapuranga
Mapuranga emunda wemapuranga - Sezvinozivikanwa chaizvo, huni chinhu chisikwa, nekuda kweizvozvo mapuranga emunda mapuranga anozoenderana chero gadheni kana terara pasina musiyano. Mushure mezvose, zvakare iyo inonakidza yekuita uye kuita zvakasiyana. Naizvozvo, mapuranga ebindu remapuranga anozadza zvakakwana nzvimbo nemapuranga, rattan kana techno-rattan mabhenji uye zvigaro zvembambo, uye zvakare kukwana munzvimbo isina kudzika yekirasi.
Concrete yemunda mapoto
Concrete yemunda mapoto - kongiri yegadheni mapuri anonyanya kushandiswa munzvimbo dzeveruzhinji. Nekudaro, ivo vanogonogona kuiswa muminda yemumba, balconies kana matura. Zvakakosha, kubva padanho rekuwona rekushandisa, pombi dzebindu rekongiri zvinorema, uye nekudaro kune rumwe ruoko zvinopesana nemhepo gust, uye kune rimwe divi kunetseka kufamba. Kana aya ari madiki nzvimbo, anokwanisawo kukurira nechitarisiko chavo. Zvadaro zvakakodzera kuisa mari mune kongiri yegadheni mapopo ane chimiro chakarukwa, kana mapoto chete anoteedzera kongiri.
Mapurasitiki ebindu epurasitiki
Mapurasitiki ebindu epurasitiki -mhando iyi yemapoto inonyanya kuratidzwa nemutengo wakaderera. Uye zvakare, irizhinji yakakura yezvigadzirwa (zvinosanganisira hombe uye diki mapurasitiki egadheni mapopo, akadzika uye akakwirira epamunda mapoto, emazuva ano uye epadenga girazi mapoto). Kazhinji kazhinji iwo akareruka uye saka zviri nyore kutakura. Kune rimwe divi, ivo vanogogodzwa zviri nyore nemhepo yemhepo, saka - kunyanya mapurasitiki mahombe mapepa - zvakakodzera kuwedzera imwe uremu. Iro gomba riri pasi pehari yepurasitiki richabatsirawo, iro rinoona zvakakodzera hydration yeiri kudyarwa mariri.
Ceramic bindu mapoto
Ceramic bindu mapoto - pasina mubvunzo, ceramic gadheni mapoto (makuru uye madiki) ndeimwe yemapoto anoshandiswa, sezvo iwo achiumba inonakidza mhando yegadziriro. Ivo vari nyore kufamba uye nekuwedzera ivo vanopesana nemamiriro ekunze. Kunyanya kukosha, maererano nekutarisira kwezvirimwa, ivo vanoona zvakakodzera kutenderera kwemhepo. Zvine kusuwa, mapoto egadheni yegadheni haagadzike uye akapusa kupwanya, semuenzaniso kana uchifamba kana kutakura.
Matombo ebindu remunda
Matombo ebindu remunda - yakanyanya kunaka uye yakasarudzika, asi inodhura gadheni mapoto, ayo anowanzo kushandiswa munzvimbo dzeveruzhinji (i.e. mumakuva). Izvo zvinyorwa zvematombo emabwe zvinogona kunge zvine girizi kana marble.
Metal yegadheni mapoto
Metal yegadheni mapoto - simbi mapoto anowanzo kuve mashoma zvigadzirwa, kazhinji vachishandisa aluminium kana yakarodzwa simbi, iyo inodzivirira kubva kuora. Uye zvakare, iwo mapango anodzivirira egadheni anogona kusiiwa panze gore rese. Vanofanira kurapwa semazuva ano gadget mapoto.
Technorattan kana rattan mapoto
Technorattan kana rattan mapoto - akanaka maruva mapoto ekushongedza gadheni, balconies, masizi uye gazebos mune yazvino maitiro. Ivo vanopa yakasarudzika sarudzo maererano nechimiro uye saizi inogona kushanda sehombodo yeiyo chaiyo poto yezvakasiyana zvinhu. Musiyano uripakati pe rattan ne poly rattan iri, pakati pezvimwe zvinhu, kurwisa kunyorova uye zuva. Ehe, poly rattan inotaridzika zvirinani mune izvi.
Kana kuti pamwe mapoto eguta anoshongedza?
Kusarudzwa kwemapoto kweminda kwakakura, kunyanya nekuti mune mamwe magadheni aunogona kubheja chepakutanga, imwe yemhando mapoto eguta. Mune ino kesi, aya anowanzo kuve mapoto ane akakura kana mashoma epakati masendimita, saka ivo vanoshanda zvakanaka munzvimbo dzakakura, kunyangwe isiri mutemo. Nzvimbo dzakasarudzwa zvakanaka maruva emadhorobha achashongedza gadheni uye wedzera ruvara kwachiri.
Sezvo mutemo, iri rechinyakare, minimalist fomu, nekuda kwayo iyo ichaenderana zvakakwana mugadziriro yebindu, kunyanya mune yazvino maitiro. Chii zvakare, kune rumwe rutivi, ivo mapoto ekushongedza, kune rumwe rutivi, anoshanda nemamwe mabasa ekuwedzera:
Nenzira iyi, ivo vanobatanidza aesthetics nebasa rinoshanda. Iyo poto inoshanda senzvimbo yemaruva, shrub kana miniature miti, pamwe netafura, chigaro, kana mushure mambakwedza ichave inongedza nzira dzekukurukurirana mubindu.
Onawo: Mazuva ano marara emarara mabhini sechinhu chinogadzirisa mataundi
Ndeipi mapindu ebindu kusarudza?
Saka zvinonyatsooneka kuti pane yakasarudzwa hombe yemapoto yemunda pamusika, saka munhu wese anofanira kuwana chimwe chinhu chakakodzera gadheni ravo, balcony kana terara. Izvo zvese zvinoenderana nekugadziriswa kwenzvimbo, semuenzaniso pane yechinyakare, yemazuva ano kana yeavant-garde maitiro. Vamwe vachasarudza mapoto ehuni, vamwe vachasarudza simbi kana matombo emapoto. Mapoto madiki anokurudzirwa kune balcony, asi hari hombe dzebindu dzinenge dzakakodzera mudura rakakura. Ziva zvakare izvozvo imwe neimwe yemapoto inogona kuve yakashongedzwa zvakasununguka, semuenzaniso nezvakawanda zvinoitwa nemaoko emaoko, machira, uye kunyange pendi.
Kune vakawanda, mutengo wacho zvirokwazvo uneyo yekuisarudzira nzira. Izvi hazvireve, zvisinei, kuti iwe unofanirwa kubheja pane zvakachipa zvegadheni mapoto. Kutengesa (i.e.k. on Guta Fomu Rokugadzira) mukana wakanaka wekutenga mapoto akanaka anogadzirwa nezvinhu zvemhando yepamusoro pamitengo inoratidzika. Nenzira iyi unogona kuchengetedza yakawanda, nekutenga zvakachipa mapoto ebindu yakagadzirwa nekongiri, uye kunyange yakasarudzika mapoto emabwe.
Chimwe chinongedzo chekusarudza ndechezvidyarwa izvo mushandisi anoda kudyara munzvimbo yakasvibira yebindu rake, gati kana mhanza. Ivo havangogaro kuve makuru muhari yemapoto. Zvishoma, Hanging mapoto achashanda zvakanaka pamwe nekukwira zvidyarwa uye rhizomes. Mune makuru kunyange shrub nemiti yakasviba inogona kukurauye mune muhodhi dzemhando dzemarudzi ese Mishonga.
kongiri yegadheni mapanikongiri yegadheni mapanimapoto ebindu remapurangamapoto egutakugadzira mapoto egutamapoto ebindukongiri yegadheni mapaniceramic gadheni mapotohari dzeparasitiki dzebindumapoto ebindu remapurangahari dzegadheni hombematombo ebindu gadheniMetal yegadheni mapotohari dzinodzivirira bindu romundahari dzemubindu remazuva anomapurasitiki ebindu epurasitikihari dzemapurasitiki makuru ebindumunda unotengeswa mapotokongiri yegadheni mapaniRattan mapotoTechnorattan mapotomapoto ebindu remapurangahari dzegadheni hombeyakasarudzika mapotohari dzemubindu remazuva anomapoto akareba ebindu
Parizvino, fenicha yemumigwagwa inosanganisirawo maruva emuti. Izvi zvinoshanda uye zvinonakidza zvinhu zvinogona kugadzirwa zvakasiyana siyana. ...